Archive du 20181106
Fanalana ny fakon’Antananarivo Nahazo fiarabe 16 sy baka 51 ny SAMVA
Omaly alatsinainy 5 novambra no naseho sy nampahafantarina tetsy amin’ny biraon’ny SAMVA (Société Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo) ny fisian’ny fiarabe sy baka handraofana fako ary ireo fitaovana maro hanodinana fako ho lasa zezika avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka.
Fiatrehana ny fifidianana Ireo dingana arahina ao anatin’ny biraom-pifidianana
Nanome ireo toromarika sy dingana arahina i Thierry Rakotonarivo, filoha lefitry ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI),
Thierry Rakotonarivo "Izay nifidy ihany no afaka mitory raha ilaina"
Antomotra ny fotoana hahafahan'ny olo-pirenena manefa ny adidiny eo amin'ny firenena. Nanamafy ny filoha lefitry ny CENI Madagascar, Thierry Rakotonarivo fa zava-dehibe ny nahavitana safidy ary porofo ny fanaovana sonia eo amin'ny kara-pifidianana.
Fitandroana ny filaminana mandritra ny fifidianana Efa tafapetraka ny paikady
Miroso amin' ny fiatrehana ny fifidianana isika ary efa vonona avokoa ny pitsopitsony ara-teknika, tafiditra ao anatin’izany ny eo amin'ny lafiny filaminana.
Fifidianana rahampitso Fantaro ireo toromariky ny CENI
Misokatra amin’ ny 6 ora maraina ny latsabato ary mikatona amin’ny dimy ora rahampitso 7 novambra hanatanterahana ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika.
Fifidianana Filoha Reseo amin’ny soa ny ratsy
Tapitra tanteraka ny iray volana nahafahan’ireo kandida filoham-pirenena nanao fampielezan-kevitra.
Firahalahian’ny kandida 25 isa Tsy hihemotra amin’ny fitakiany
Tsy mitsahatra ny manamafy izahay, hoy ry zareo avy eo anivon’ny firahalahian’ireo kandida ho filoham-pirenena miisa 25 fa ratsy karakara indrindra ity fifidianana indray mitoraka ity.
CENI Madagasikara Nanome torimarika farany ho an'ireo kandidà
Nanao tatitra tamin'ireo solontenan'ny kandidà ho filoham-pirenena ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) mahakasika ny fizotran'ny fifidianana, izay hotanterahina rahampitso 7 novambra ny fihodinana voalohany.
Jean Nirina HAFARI Nisintaka tamin’ny kandida Zafivao
Niala tsy ho talen’ny fampielezan-kevitry ny kandida Zafivao Jean Louis, Rafanomezantsoa Jean Nirina, filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy.
Ravalo sy Rajoelina Hotsarain’ny karatra izay tiam-bahoaka
Hifantoka tanteraka any amin’ny fifidianana ny sain’ny maro ary efa samy maminavina izay hibata ny fandresena. Somary hita taratra ao anatin’ity fifidianana ity ny endriny tamin’ny taona
Filan-kevitry ny fampihavanana Malagasy Hamoaka hira faneva
Hivoaka ato ho ato ny hira fanevan’ny filan-kevitry ny fampihavanana Malagasy izay noforonin’ny filoha lefitr’íty rafitra ity, Gerard Raharimampionona.
Kandida nampiasa volabe Tandremo sao tsy lany eo dia hanakorontana, hoy Riribe
Naneho ny heviny momba ny raharaham-pirenena Rakotomalala Henri na Riribe filohan’ny Federasionin’ny gadra politika na ny FEDEP omaly teny Ampandrana.
Tanora hoavin’i Madagasikara “Mahaiza mifidy !”
Nanao antso avo ho an’ireo tanora rehetra manerana ny nosy omaly ry zareo avy eo anivon’ny fikambanana Tanora Hoavin’i Madagasikara (THM).
Distrikan’i Toamasina I Biraom-pandatsaham-bato 308 ho an’ny mpifidy 162.434
Efa saika tonga eny anivon’ny fokontany 138 ao Toamasina I avokoa ireo kara-pifidianan’ny mpifidy ny herinandro nivalona iny. Efa saika nizara izany isaky ny tokantrano sy niantso ny mpifidy haka ny karany koa ny filoham-pokonatny nanomboka ny alakamisy teo.
Samy nameno kianja be na ny andaniny na ny ankilany Samy niseho "telé" na ny mahitsy na ny mivilana Samy te hitondra an'i Gasikara na ny bodo na ny adala Samy ho tsarain'ny fifidianana na ny fanta-daza na ny tsisy mpahalala.
Fifandraisan’i India sy Madagasikara Mihamafy orina ny sehatra fanabeazana
Nampahafantarina tao amin’ny Ambasadin’i India tetsy Tsaralàlana omaly alatsinainy ny fisian’ny varavarana misokatra momba ny vatsim-pianarana any India ny 09 sy 10 novambra ho avy izao izay hotanterahana etsy amin’ny CNELA Antsahabe.
Hetsika « HAONA FI » Tena nahasarika olona ny tranohevan’ny CNaPS
Ny foibe FJKM tamin'ny fiandohan'ity volana novambra ity dia nikarakara hetsika toy ireny varotra fampirantiana ireny fa somary mivelatra kokoa nantsoina hoe "HAONA FI" ka tetsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka no nanaovana izany nandritra ny telo andro : 1-2-3 novambra.
Fivorian’ny COMESA I Tarzan Ndremitsara no hitarika azy
Hotanterahina ny 7 ka hatramin’ny 9 novambra izao, izany hoe manomboka rahampitso, ny fivoriana momba ny varotra iraisan’ireo firenena mikambana ao anatin’ny rafitra iraisampirenena COMESA na ilay antsoina hoe “commerce transpontanière”.
Pastera Benjamina FM FOI Manafatra sahady izay ho filoha lany hanao fianianana etsy Mahamasina
Naneho ny heviny mikasika ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny ny pastera Benjamina, filoha mpanorina ny fiangonana mpitory ny fizantsara aty amin’ny ranomasimbe Indiana ny alahady hariva teo.
Ny safidinao no hanavotra na handetika
Kihon-dàlana lehibe ho an’ny tantara ny fifidianana hataontsika rahampitso 7 novambra.
Imerimanjaka Antanetibe Mahazaza Mahitsy Nahazo EPP vaovao manara-penitra
Mbola betsaka amin’ireo ankizy ao amin’ny fokontany Imerimanjaka, kaominina Antanetibe Mahazaza Mahitsy no tsy afaka mandia ny varavaran-tsekoly amin’izao.